प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी : कसलाई कति मन्त्रालय ? - inaruwaonline.com
प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी : कसलाई कति मन्त्रालय ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०२, २०७४ समय: ४:१७:३२
काठमाण्डाै । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन तयारी थालेका छन्। देउवाले २४ जेठमा माओवादी केन्द्र, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम तथा मधेसी दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। सरकारलाई पूर्णता दिनेलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार छलफल हुने भएको छ। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले दुई नेताबीचको आइतबारका लागि तय बैठक सोमबारलाई सारिएको जनाए।